Shikhar Post » सन्दर्भ एनएमए निर्वाचनः के भन्छन् पर्यटकीय संघसंस्थाका अध्यक्ष ?
सन्दर्भ एनएमए निर्वाचनः के भन्छन् पर्यटकीय संघसंस्थाका अध्यक्ष ?
नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)मा चुनावी रँडाको मच्चिएको छ । जिम्बाजाङबु शेर्पा प्यानल र सन्तबीर लामा प्यानलबीच हुन लागेको चुनावको मुखमा आइपुग्दा विभिन्न खालका प्रचारबाजीहरु भइरहेका छन् । अत्यान्तै महत्वकांक्षीय योजनासहितको प्रतिबद्धता मात्रै होइन एकले अर्कालाई खुईल्याउने अनेक शब्दवाणसमेत भइरहेको छ । यत्तिसम्म कि एक पक्षले अर्को पक्षलाई पीक खोस्ने समुह भनेर ट्याग भिढाईदिनेसम्मको काम भएको छ यहाँ । त्यत्तिमात्रै कहाँ हो र आफ्नो पक्ष सबैभन्दा समावेशी र सक्षम भनेर सामाजिक सञ्जाल अनि आआफ्ना पोल्टाका मिडियाहरुमा व्यापक प्रचार भइरहेको छ । चुनावको नाउँमा तडक भडक सुरु भइसकेको छ । यसै सन्दर्भमा पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशिल पर्यटकीय संघसंस्थाका अध्यक्षहरुसँग शिखरपोष्टले गरेको अन्तर संवादको सम्पादित अंशः
जिम्बा समुहले धमिलो पानीमाथि माछा मार्ने काम गर्‍यो
चन्द्र रिजाल, अध्यक्ष, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)
एनएमएको नेतृत्वमा सधै एउटै मान्छे दोहोरिरहने प्रबृत्ति देखिन्छ । यो प्रबृत्तिले नयाँ नेतृत्व र योजना कार्यक्रम विल्कुलै आउँदैन । यो राम्रो होइन । आफ्नो योग्यता क्षमता देखाउन सबै चाहान्छ । नेतृत्वले आफ्नो कार्यकालमा बसेर जुन काम गरेर देखायो, उसले अर्को ठाउँमा गएर लिडरशिप गर्दा नयाँ केही काम अगाडि बढाउन सक्छ तर त्यही ठाउँलाई ओगटिराखेर नयाँ केही गर्छु भन्नुको कुनै तुक छैन । पटक पटक दोहोरिरहँदा त्यहाँभित्र उसको केही स्वार्थ लुकेको छ की भन्ने आंशका उब्जिन्छ र विद्रोह हुन्छ ।
जहाँसम्म राजनीतिकरणको कुरा छ, आफुलाई चाहिँदा चाही राजनीतिक संगठनलाई प्रयोग गर्ने र जब आफुलाई चाहिँदैन त्यत्तिखेर चाही राजनीति गरियो भन्दै बद्नाम गर्ने र त्यसलाई बढि प्रचारबाजीमा ल्याएर संस्थाको मुख्य एजेण्डालाई गुम्राहमा राख्ने प्रबृत्ति अहिले भइरहेको छ । यो अत्यान्तै गलत हो । त्यसअर्थमा जिम्बा जाङबु शेर्पा भन्दा सन्तबीर लामा एक स्टेप माथि हुनुहुन्छ ।
अर्को पीक खोस्ने र जोगाउने कुरा अहिले खुब प्रचार गरिएको छ । यो विषयमा प्रष्ट पार्न चाहान्छु । जतिखेर सरकारले पीक खोस्न लागेको थियो, त्यत्तिखेर आङछिरिङ शेर्पा एनएमएको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । त्यत्तिखेरको नेतृत्वले पीक खोस्नबाट किन रोकेन र रोक्न सकेन अर्थात् पीक खोस्नको लागि किन उसले सहयोग ग¥यो भन्ने अर्थ पनि लाग्छ नि त । यो अर्कालाई दोष लगाएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने प्रबृत्तिको पराकाष्ठ हो । एउटा व्यक्तिले, एउटा समुहले अथवा एउटा पार्टीले पीक खोस्न चाहेर वा नचाहेर पीक खोसिने होइन । त्यो हिजोदेखिको लामो व्यवसायिक सहकार्य, एनएमएको गतिविधिलाई समाज र सम्बन्धित निकायले हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोण तय गर्ने त अहिले जो आरोप लगाइरहेकै मानिसहरुको नेतृत्वले नै होइन र ?
आफु त्यही ठाउँमा बसेर पीक एनएमएले पाउनुपर्छ भन्ने आवश्यकता र एनएमएले पीक पाउँदा व्यवसायी, पर्वतारोहीलाई फाइदा पु¥याउनेगरी काम गर्न नसक्ने, संस्थाको नाममा आफ्नो स्वार्थपूर्तितर्फ ध्यानकेन्द्रित गर्ने अनि फलानाले पीक खोस्यो, ढिस्कानाले एसो ग¥यो, उसो ग¥यो भन्दै रोइकराई गरिहिड्नुको अर्थ के ?
मलाई लाग्छ, यो गलत नियतका साथ भोट संकलन गर्ने चुनावी एजेण्डा हो । व्यवसायीहरु केही नयाँ काम चाहन्छन्, आफ्नो हक अधिकारको लागि संस्थाको नेतृत्वबाट केही न केही अपेक्षा गर्छन् । तर अहिलेसम्म पटक पटक आलोपालो गर्दै आएका नेतृत्वले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्यो ? सकेनन् र त्यहि सम्बोधनका लागि एनएमएमा सन्तबीर लामाको नेतृत्व अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो । र अहिलेको सबै परिस्थितिलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगबाट विश्लेषण गर्दा सन्त विर लामाको प्यानलको जीत सुनिश्चत भइसकेको छ ।
एउटा प्रोपागाण्डाको रुपमा जिम्बाको टिम शेर्पा टिम भनेर एक प्रकारको कुप्रचार गर्ने कोसिस गरिएको छ यो अत्यान्तै गलत छ । नेपाल विविध जातजाति, धर्म, संस्कृतिले भरिपूर्ण देश हो । अहिले जाति, जनजातिको विषय उठाएर धमिलो पानीमाथि माछा मार्ने कोसिस भइरहेको छ । यो जातीय विषयलाई उठाएर संस्थालाई सिध्याउने खेल पनि हो जस्तो लाग्छ । यसरी अब व्यवसायिक संस्थाको प्रतिस्पर्धामा पनि जातजातिको कुरालाई सबैभन्दा बढि उठाएर राजनीति गरिखाने प्रबृत्तिले हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौं । यो अहिले समग्र नेपाली समुदायमा पनि थियो । उम्मेद्धारलाई फर्केर हेर्नुस् सन्तविर लामा नेतृत्वको प्यानल सबैभन्दा समावेशी टिम छ । यहाँ शेर्पा, तामाङ, श्रेष्ठ, बाहुन, गुरुङलगायत सबै जाति समुदाय र लिंगीय हिसाबले महिलाको प्रतिनिधित्व गरिएको छ ।
जिम्बा पहिल्यै अध्यक्ष भएर असफल भइसकेका व्यक्ति हुन्
कमल सापकोटा, अध्यक्ष, गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च (भिटोफ नेपाल)
नेपाल पर्वतारोहण संघको निर्वाचनमा जिम्बा जाङबु भन्दा सन्त विर लामाकै सम्भावना बढि देखिन्छ । मुख्य कुरा चाही यो टिम समावेशी छ । जातीय सन्तुलन, अनु्भवी व्यवसायी, आरोही, महिला सबैलाई समेटिएको टिम हो यो । र अर्को चाँही जिम्बा जाङबु एक पटक अध्यक्ष भएर असफल भएर निस्केको हो । अब फेरी गएर केही नयाँ गर्ने पनि देखिदैन । सन्त बिरको कुरा गर्ने हो भने उहाँ पहिलो चोटी एनएमए अध्यक्षमा जाँदैहुनुहुन्छ र उहाँले एनएमएको विभिन्न पदीय हैसियतमा रहेर अनुभव प्राप्त गरेको तथा यस पटक अध्यक्ष भइसकेपछि फेरी अध्यक्ष नहुने उद्घोष गर्नुभएको छ । त्यस्तै विधान संसोधन गरेर एक पटक भन्दा बढि अध्यक्ष हुन नपाईने व्यवस्था गर्ने उहाँको एजेण्डा छ ।
आरोहीहरुका लागि तालिम दिने, सगरमाथा आरोहणको क्रममा आरोहीसँगै आरोहण गर्ने अन्य सहयोगीहरुलाई पनि सर्टिफिकेटको व्यवस्था गराउने, आरोहीहरुको हकहित सुनिश्चितताका लागि विभिन्न खालका कार्यक्रमहरु प्याकेजमै ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सार्नुभएको छ । त्यसपछि यहाँ वार्षिक सबैभन्दा बढि पीक बेच्ने व्यवसायीदेखि ख्यातिप्राप्त आरोहीहरु, स्वतन्त्र व्यवसायीहरुदेखि हाइप्रोफाइल भएका व्यवसायी तथा राजनीतिक पहुँच भएका व्यवसायीहरु हुनुहुन्छ । त्यसले भोली एनएमएको लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्न मद्दत मिल्ने कुरामा दुईमत छैन । यीलगायतका कारण यो प्यानल बढि सक्षम छ भन्ने मेरो बुझाई हो ।
जहाँसम्म पीक खोस्ने जस्ता आरोप लगाएर झुटको खेती गरिएको छ, त्यो चाही के हो भने हिजो पीक खोसिदै गर्दा सन्तविर लामा, ठाकुरराज पाण्डे, टिकाराम गुरुङलगायत यो प्यानलका भाइटल पोष्टका उम्मेद्धारहरुकै पहल र नेतृत्वदायी भूमिकाले अदालती प्रक्रिया झेल्दै एनएमए पीक जोगाउने काम भएको कुरा जगजाहेर छ । भनेपछि यो गलत प्रचार मात्रै हो । केही दिनअघि कांगे्रस निकट निटले सन्तबीर लामाकै नेतृत्वमा सर्वसम्मत टिम बनाउ भनेको थियो । त्यत्तिखेर उहाँहरुले सन्तबीर सबैभन्दा राम्रो मान्छे हो भन्दै लबिङ गर्नुभएको थियो । केही दिन अघि आफ्नो पक्षमा हुँदासम्म चाही सन्तबीर लामा पीक नखोस्ने मान्छे हुने र अहिले चाही पीक खोस्ने रे । यो कसरी हुन सक्छ ? तसर्थ, यो गलत प्रचार गर्नुभएको मात्रै हो । यो खालको चुनावी एजेण्डाले उहाँहरु आफैलाई पनि फाइदा पुगेको छैन ।
अर्को कुरा उहाँहरुले आफ्नो टिम पुरै शेर्पाहरुको टिम हो भन्दै कु प्रचार गर्नुभएको छ । अध्यक्ष पदमा शेर्पा हुँदैमा सबै शेर्पा भन्दै गर्दा यता पनि त उपाध्यक्ष, अन्य पदहरुमा शेर्पा नै हुनुहुन्छ त । अनि जो सन्तबीर लामाको टिमलाई जिताउनुपर्छ भन्ने अभियन्ताहरु पनि शेर्पा नै हुनुहुन्छ । अहिले सन्तबीर लामा समुहको चुनावी अभियान समितिको संयोजकको भूमिकामा बरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी निमानुरु शेर्पा हुनुहुन्छ । भनेपछि उहाँहरुको त्यो प्रचार के ठीक छ त ? त्यसैले यस्ता भ्रमको खेती गरेर अब पर्वतीय पर्यटनको प्रवद्र्धन र विकास हुन सक्दैन । पर्वतीय पर्यटनको लागि निश्चित योजना र एजेण्डागत कार्यक्रम अघि बढाएकोले सन्तबीर लामा समुहलाई जिताउँदा आरोही तथा व्यवसायीलाई फाइदा पुग्छ । त्यसैले यो भिटोफको संस्थागत निर्णय त भएको होइन तर भिटोफ अध्यक्षको हैसियतले सन्तबीर लामा नेतृत्वका प्यानललाई जिताएर अहिलेसम्म हुन नसकेका कामहरु पूरा गराउन सम्पूर्ण आरोही, व्यवसायीहरुलाई एकजुट हुन आह्वान गर्दछु ।
एउटै व्यक्ति पटक पटक अध्यक्ष बन्नु नयाँ पुस्ताका लागि घातक
मधुसुदन आचार्य, अध्यक्ष, नेपाल एसोसिएसन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेन्टस् (नाट्टा)
एक पटक नेतृत्व लिइसकेको व्यक्तिले नैतिकताको हिसाबले पनि अर्कोलाई सहमति गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । सहमति भएर नेतृत्वको लागि दोहो¥याउँनु त ठीकै होला तर सहमति हुनै नसक्ने अवस्थामा जो एक पटक नेतृत्वमा आएर आफुले सकेको काम गरेको देखिसकियो र उही व्यक्ति फेरी उठ्नु राम्रो होइन भन्ने मेरो धारणा छ । एनएमए जस्तो संस्थाको लागि एकदम क्यापेवल नयाँ मान्छे अघि बढिरहेको बेला पहिले अध्यक्ष खाइसकेकाले फेरी भिड्छु भनेर आउनु अलिक ठीक होइन । सिधै भन्दाखेरी नेतृत्व परिवर्तत हुँदा केही न केही नयाँ काम हुन्छ । जस्तो नाट्टाकै इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि टेकचन्द्र पोखरेल यता कुनैपनि अध्यक्ष दोहोरिएको छैन । हरेक नयाँ नयाँ नेतृत्व आउँदा केही न केही रौनक, जोश जागरसहितको काम हुन्छ भन्ने यसबाट पुष्टि हुन्छ । त्यसले संस्थालाई नै फाइदा पुग्ने हो ।
नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदै जाने हो भने मात्रै भोली अरु सबैले नेतृत्व लिन पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । नत्र एउटै व्यक्ति दोहो¥याएर अध्यक्ष बन्ने हो भने नयाँ पुस्ताले कहिल्यै पनि अवसर पाउँदैन र नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण हुन सक्दैन । त्यसअर्थमा सन्तबीर लामालाई जिताउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो । नेतृत्वका लागि नयाँ पुस्ता, जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीयमात्रै नभएर अनुभव, दक्षताजस्ता सबै कुरालाई हेर्नुपर्दछ । पर्यटकीय संघसंस्थाको चुनावका थुप्रै दृष्टान्तहरु छन् । तर जहिले पनि जित्ने र हार्नेबीचको लडाईले गर्नुपर्ने काम र पुग्नुपर्ने लक्ष्यमा नपुग्ने जो सिर्जना हुँदै आइरहेको छ, एनएमएमा यस्तो नहोस् । त्यसैले टिम अघि बढाउँदा सहमतिको प्रयास अझै होस् भन्ने कुरा राख्छु ।
समावेशी र सशक्त टिम एनएमएका लागि आवश्यक छ
चन्द्र दाहाल, अध्यक्ष, नेपाल एसोसिएशन अफ राफ्टिङ एजेन्ट (नारा)
एनएमएलाई अगाडि बढाउनका लागि अहिलेका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले जसले जे भनेपनि निक्कै राम्रो काम गर्नुभएको छ भन्ने लाग्छ । अहिले नयाँ नेतृत्वका लागि सन्तबीर लामा नेतृत्वको प्यानल र जिम्बाजाङ शेर्पा प्यानलबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । यो दुईटाबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । मेरो आफ्नो कुरा गर्नुपर्दा दुईटा टिममध्ये सन्तबीर लामाको टिम केही गर्ला र पर्वतीय पर्यटनमा केही नयाँ आयम थप्छ कि भन्ने सशक्त, समावेशी र चुस्त टिम बनेको छ । त्यसैले यसपालीको चुनावमा त्यही टिमलाई अगाडि बढाउदा समग्र एनएमए तथा पर्वतीय पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासमा केही नयाँ खुट्किला चढ्न मद्दत पुग्छ कि भन्ने लाग्छ ।
सन्तबीरलाई नै किन भन्ने कुरा गर्ने हो भने उहाँ दुई दशकभन्दा बढि एनएमएसँग उठबस गर्नुभएको छ, अनुभव बटुल्नुभएको छ । वर्तमान कार्यसमितिमा पनि उपाध्यक्ष भएर आरोही र व्यवसायीको हकहितका लागि निक्कै राम्रो काम गर्नुभएको छ । एक नम्बरमा त सन्तबीर आफै सशक्त र एनएमएलाई हाक्न सक्ने योग्य नेता हुनुहुन्छ । अनि अर्को कुरा वहाँको टिममा सबै क्षेत्र, जाति, व्यवसायिकता, अनुभवी व्यक्तिहरुलाई समेटिएको छ । त्यसो भन्दाखेरी जिम्बाको चाही नेतृत्व गर्ने क्षमता नै छैन भन्ने होइन । उहाँले यो भन्दा अगाडि पनि अध्यक्ष भएर काम गरि सक्नुभएको हुनाले नयाँ नेतृत्वलाई अघि बढाउदा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
पीक बचाउने पक्षमा लागेकोले हाम्रो जित सुनिश्चत छ
दीपक महत, नेपाल पर्यटन व्यवसायी संघ (निट)
स्वभाविक रुपमा चुनाव भनेको आफ्नो एजेण्डाका आधारमा मतदाताबीच जाने काम हुन्छ । त्यहीअनुरुप हामी अहिले मतदातहरुसँग सामुहिक भेटघाट गर्ने र उम्मेद्धारहरुले परिचय गराउँदै भोट माग्ने काम तीब्र छ । अब अहिलेको चुनावी एजेण्डाको कुरा गर्दा सरकारले जुन साधनस्रोत एनएमएलाई दिएको थियो, त्यसैको सदुपयोगबाट नेपालको पर्वतीय पर्यटन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन गर्ने काम भइरहेको सन्दर्भमा एमालेको मन्त्रीत्वकालमा लामो इतिहास बोकेको नेपाल पर्वतारोहण संघमातहतको पीक खोस्ने काम भयो । यो पर्वतीय पर्यटनमा सिन्डिकेट लगाउने एउटा खेल हो जसको मतियार बनेर पूर्णता दिने काम तत्कालिन पर्यटनमन्त्री कृपासुर शेर्पाले गर्नुभयो । पछि अदालत अदालतले एक प्रकारको न्याय त दिलायो तर अझै पनि निश्चित समय दिएको हुनाले यसलाई कायमै गर्नको लागि थप लडाई लड्नुपर्नेछ । त्यसका लागि हामीले जिम्बा नेतृत्वको टिमलाई अघि बढाइरहेका हौं ।
एनएमएलाई साधनस्रोत विहिन पार्ने र भएका ठाउँमा ¥याल चुहाएर आफ्नो सिरिफ स्वार्थपूर्तिको लागि समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई सिध्याउने कोशिस भइरहेको छ । त्यसको नेतृत्व सन्तबीर पक्षले गरिरहेको छ भने हाम्रो पक्षले त्यसो हुन दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा लडिरहेका छौं । पीकको रोयल्टीवापतको सानो रकमले पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा यत्ति ठूलो काम भइरहेकोले यसलाई गुम्न दिनु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले उठाइरहेका छौं ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा एकप्रकारको प्रचार पनि गरिएको छ कि पीक खोसिदै गर्दा अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पा युरोपमा हुनुहुन्थ्यो । पीक बचाउनको लागि सन्तबीरले नेतृत्व नगरेको भए हुँदैन थियो भन्ने खालका प्रचार भइरहेका छन् । इतिहास साझि छ । यो कुरा नछुटाइकन लेख्दिनु होला, आङछिरिङले पीक खोसिएको सुरुदेखि अन्त्यसम्म अगुवाई गरेर विभिन्न ढोका ढक्ढकाउने काम गर्नुभयो । व्यक्तिगत रुपबाट सन्तबीर लामालाई म यसमा दोष दिन्न । जतिखेर पीक खोसियो त्यत्तिखेर सन्तबीर लामा पनि हिड्नुभएको थियो । तर अहिले उहाँलाई बोकेर हिड्ने मानिसहरु कृपासुर कै सल्लाहकारहरु छन् । प्रकारान्तरमा त्यो नियत सन्तबीर लामाले नबोक्दा नबोक्दै पनि उहाँका वरीपर बस्नेहरु ¥याल बगाउँदै पीक खोस्ने मतियारहरु छन् । यही गिर्दोका कारण सन्तबीर लामा जित्नुभयो भने पनि एक्लै लडाई लड्न सक्नुहुन्न । एक्लो हुनु हुनेछ र अन्तत उहाँ पनि बद्नाम हुनु हुनेछ । उहाँलाई सिखण्डी बनाउन खोजिएको छ । सन्तबीर लामाले लडेकोले गर्दा पीक जोगाइन्छ भन्ने कुरा व्यवहारिक रुपबाट कुनैपनि हालतमा सम्भव छैन । त्यसैले अहिलेको चुनाव भनेको एनएमए सिध्याएर कुनै ठूलो कम्पनीलाई सुम्पिने कि यसलाई बचाएर परिस्किृत गर्दै जाने हो भन्ने हो ।
बाँकी भनेको त यो उद्योगमा रहेका सबैका एजेण्डा एउटै हो । मेरो यो तेरो यो भन्ने कुरा प्रस्तुतिमा फरक होला व्यवहारिक रुपमा एउटै हो । पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा सिण्डिकेट लगाएर केही ठूलाबढाहरुले आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा लाग्दा यहाँका वास्ताविक आरोही र तीनका परिवारको रोजीरोटी खोसिन्छ । त्यसको लागि हामी लडिरहेका छौं । त्यसैले ठूलो माछाले सानो माछालाई निल्ने तयारी हो भन्ने कुरा मतदाताहरुले बुझ्छन् । आफ्नो रोजीरोटी खोसिदै गर्दा टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनन् । जिम्बाजाङबु शेर्पा समुहलाई अत्याधिक मतले विजय गराउँछन् ।
आलोपालो गरेर खाइरहने रबैयाँको विरुद्ध लागेका हौं
नवराज दाहाल, संयोजक, नेपाल पर्यटन व्यवसायी संगठन
सन्तबीर लामा नेतृत्वको टिम माउन्टेनरिङ टुरिजमको मर्म र भावना बुझ्नो एक मात्रै टिम हो । यो आरोही तथा व्यवसायीहरुको चाहानाअनुरुप नयाँ, समावेशी र सक्षम टिम पनि हो । यो टिम लिंगीय, क्षेत्रीय, जातीय सबै हिसाबले समावेशी बनेको कुरा उम्मेद्धारहरुलाई हेर्दा थाह भइहाल्छ । यसमा पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा सफल र वार्षिक रुपमा निरन्तर सबैभन्दा बढि एनएमएको पीक सेल गर्नेदेखि हिमाल आरोहण गरेर विभिन्न खालका ख्यातीप्राप्त आरोहीहरु समेटिएका छन् । यो टिमले कमिटमेन्ट गरिसकेको छ कि एक कार्यकाल सक्षम नेतृत्व गरिसकेपछि अर्को नयाँ नेतृत्वलाई पद हस्तान्तरण गर्ने भनेर । अर्को कुरा जिम्बा र आङछिरिङबीच जुन आलोपालो गरेर खाइरहने रबैयाँ भइरहेको र अरु चाही त्यसको मुखदर्शक भएर बस्नुपर्ने अवस्था जो अहिलेसम्म विद्यमान छ त्यसलाई हटाएर पर्वतीय पर्यटनमा नयाँ र दीर्घकालिन योजनाका साथ काम अघि बढाउनुपर्छ भन्ने आरोही, व्यवसायीहरुको माग छ । व्यवसायिक अधिकाशं संघसंस्थाहरु एनएमएका वर्तमान कार्यसमितिको अध्यक्षबाहेक अधिकांश कार्यसमिति सन्तबीर लामालाई जिताउने अभियानमा छ भने नेपाल पर्यटन व्यवसायी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संगठनको पूर्ण समर्थन छ ।
यता जिम्बाको टिमका उम्मेद्धारहरुको कुरा गर्दा कहिले टानमा, कहिले हानमा, कहिले नाट्टामा हुँदा हुँदा स्थानीय चुनावसमेत नछोड्ने पाएजति सबै चुनावमा भाग लिने खालका पात्र पनि छन् । जिम्बा समुहको महासचिवकै कुरा गर्दा पनि यहाँ पर्यटन व्यवसायी भन्ने अनि रुबी भ्याली गाउँपालिका अध्यक्ष उम्मेद्धार बनेर हारेर आउनुभएको हो । त्यत्तिमात्रै होइन टान, गणेश हिमाल पर्यटन विकास समिति, गुरुङ पर्यटन व्यवसायी संघ, नेपालजस्ता भाको जति सबै ठाउँमा उहाँ आफु रहनै पर्ने खालको देखिन्छ । अध्यक्षकै कुरा गर्दा पनि पहिले नै अध्यक्ष भएर परिक्षण भइसकेको मान्छे फेरी एनएमएमा आउनु यो, सबैको हितमा छैन ।
निश्चित रुपमा पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा शेर्पाहरुको सहभागिता र योगदान धेरै छ । त्यसै आधारमा हामीले टिम बनाउँदा पनि उपाध्यक्ष अधिकांश सदस्य पदका लागि शेर्पा समुदायबाट समेटेका छौं । तर, त्यसो भनिरहँदा यहाँ शेर्पामात्रै छन् भन्ने कुरा पनि गलत हो यहाँ अन्य जाति, जनजाति पनि छन् ती सबैलाई समेटेर समावेशी टिम बनाएका छौं हामीले । अर्को कुरा पीक खोस्ने र बचाउनेबीचको लडाई भन्ने हल्लाबाजीप्रति मेरो गम्भिर आपत्ति छ । यो अरु केही नभएर झुटको खेती गर्नेहरुले गरेको कु प्रचार हो । त्यो पीक सरकारले खोस्ने निर्णय गर्दैगर्दा हरेक ठाउँमा ढोका ढक्ढक्याएर पीक बचाउने नेतृत्वदायी भूमिका हामीले अघि सारेका सन्त बीर लामा, टिका गुरुङहरु हुनुहुन्छ भनेपछि यो कसरी सही हुनसक्दछ । बरु कुरो के हो भने पीकको रोयल्टीवापतको रकम दुरुपयोग भइरहेको छ त्यही पीकको दुरुपयोग गर्नेहरु फेरी पटक पटक नेतृत्वमा जान खोज्दैछन् । त्यही कुरा हामीले उठाएका हौं कि पीकको रोयल्टी दुरुपयोग गर्नु हुँदैन र दुरुपयोग गर्ने मानिस पटक पटक नेतृत्वमा जानुहुँदैन भनेर ।
हाम्रो टिममा कुनै राजनीतिक लेप छैन । यहाँ हाम्रा मुख्य नेतृत्वमाथि विभिन्न खालका अनर्गल प्रचार गरेर व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने खालका कामहरु जुन तरिकाले भइरहेको छ यो हारको मानसिकताको एउटा उपज हो । सन्तबीर लामाको प्यानल बनाउँदा कुनै नेताको छाया परेको छैन । बरु, जिम्बाको समुहमा बढि राजनीति हाबी भएको छ । कांगे्रस नेता बलबहादुर केसीले सबैको मोवाइलमा एसएमएस गरेर जिम्बाको भोट माग्ने काम खुलेआम भइरहेको छ । अनि जिम्बा स्वयंले पनि विभिन्न नेताहरुकहाँ गएर चाकडी गर्ने, हारगुहार माग्ने काम गरिरहेका छन् भने उनीहरु हार्ने निश्चित भएपछि विभिन्न नेताहरुलाई ल्याएर दबाब र प्रभाव सिर्जना गर्ने हर कोशिसमा छन् । यसबाट उनीहरुले चाही एनएमएलाई राजनीतिको भूमरीमा पार्न खोजिरहेका प्रष्ट हुन्छ । यसअर्थमा सन्तबीर जित्ने प्रसस्तै आधारहरु छन्, अन्तत यो समुह नै जित्ने हो ।
विधानअनुसार जिम्बा उठ्नुभएको हो, किन बेतुकको कुरा गरिहिड्न ?
रामशरण थपलिया, अध्यक्ष, पर्यटन सेवा संघ
एनएमएको स्थापना कुमार खड्कविक्रम शाहले गरेता पनि अहिलेसम्म त्यसको गौरब गरिमालाई कायम राख्ने भनेको शेर्पाहरुबाटै भएको हो । यो क्षेत्रको दुःख या सुखमा मुख्य भूमिका खेल्ने भनेको शेर्पाहरु नै हो । र चुनावी दौडानमा हिड्दैगर्दा जिम्बा जाङबु शेर्पाको टिमले अत्याधिक मतले जित्ने अवस्था देखिएको छ । विभिन्न भेला समारोहहरुको सहभागिता अत्यान्तै उत्साहजनक छ ।
एनएमएमा आङछिरिङ शेर्पाकै कार्यकालमा पीक खोस्नका लागि विभिन्न खालका आक्रमणहरु भयो । पीकहरुलाई सरकारले लैजाने कुरा अघि बढ्यो । त्योसँगै यस क्षेत्रका निमुखाहरुको रोजिरोटी खोसिने सम्भावना बढेर गयो ।
तर पछि सम्मानित अदालतले एनएमएलाई नै पीक फिर्ता दिएपछि केही समयको लागि त्यो समस्या त टर्‍यो तर, पीक खोसेर सिण्डिकेट लागु गर्नेहरुले अहिले पनि चुरुफुरी गरिरहेको देखिन्छ । त्यसकै विरुद्धमा हाम्रो लडाई हो यसपालीको चुनाव । टेण्डरमार्फत पीक सञ्चालन गर्ने काम विभिन्न देशमा नभएका होइनन् । राज्यको मातहतमा पीक पुगेपछि टेण्डरमार्फत ती पीक सञ्चालन गराउँदा त्यहाँ पहुँचवाला, ठूला घरानाहरुको मात्रै हालीमुहाली हुने संस्कारको विकास हुन्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । त्यसो हुँदा गरिखाने हजारौ हजार निमुखा आरोही तथा श्रमजिवीहरुको रोजीरोटी खोस्ने निश्चित प्राय छ । यदि एनएमएको पीक खोसियो भने हिजोका आरोहीहरु तथा तिनका परिवारले के गर्ने ? त्यसैले यसपाली हामी ती निमुखा आरोही र श्रमजिवीको पक्षलाई आफ्नो मुख्य एजेण्डा बनाएर अघि बढेका छौं । विशेषगरी हिमालको लागि हिमालमै काम गर्नेहरुको लागि हाम्रो साथ हो ।
जिम्बा आफै आरोही, टिम सबै समावेशी, सक्षम तथा ख्यातीप्राप्त आरोहीहरु छन् । टिमको ५० प्रतिशत शेर्पा तथा आरोही छन् । हाम्रो मकसत पनि के हो भने जुन व्यक्तिले सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ उसैलाई अगाडि बढाएर यस क्षेत्रको समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यस अर्थमा हाम्रो जित सुनिश्चित छ भनिरहेका छौं । त्यसैले चुनाव जितेपछि एनएमएको अस्तित्व जोगाउनको लागि लड्न सक्ने व्यक्तिलाई जिताउनुपर्छ त्यो व्यक्ति भनेको जिम्बा नै हो ।
हिजो पीक खोस्ने मानिसका मतियारहरुले अहिले पनि एनएमएको पीक सरकारलाई बुझाउनको लागि विभिन्न रुप र रंगबाट खेलहरु भइरहेका छन् । सुरुमा हामीले सर्वसम्मतको प्रयास पनि गरेका थियौं । आस्थाको हिसाबले तीनटा पार्टीले तीनटा उम्मेद्धार घोषणा गर्‍यो । तर, आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्काको स्थिति साथीहरुले सिर्जना गरेपछि आजको अवस्थामा हामी आइपुगेका हौं । खुल्ला छलफल गर्दा उहाँहरुले सन्तबीरको विकल्प छैन भनेपछि कुरा मिलेन र चुनावी मैदानमा आउनुपर्‍यो । दोस्रो पटक उठेर पदलोलुपता भन्ने कुरा आयो यो सिधै विधान विपरित छ । अब विधानलाई आधार मानेर अर्को चोटी जिम्बा आउनुहुन्न । त्यसैले यस्ता कुतर्क गरिहिड्नुको कुनै तुक छैन ।
सन्तबीर लामालाई जिताउने निर्णय गरिसक्यौं
राजेन्द्र लामा, अध्यक्ष, नेपाल क्यानोनिङ एसोसिएशन
एनएमएलाई विगत तीन दशकदेखि सिंगो समुदायको नाउँमा एउटै मान्छेले उपभोग गरिरहेको छ । यो प्रबृत्ति दोहोरिन नदिनका निम्ति हामीले संस्थागत रुपमै सन्तबीर लामा नेतृत्वको प्यानललाई जिताउनको लागि अभियान गर्ने निर्णय नै गरिसकेका छौं । जातको नाममा आरोही, स्वतन्त्र व्यवसायीहरुको अधिकारमाथि कुठाराघात गर्ने काम भइरहेको छ । अर्को कुरा यो पनि बुझ्नुपर्छ कि, जसले जातिको नाममा यस्तो काम गरिरहेको छ उसले सम्बन्धित जाति समुदायलाई आफु माथि चढ्ने भर्‍याङमात्रै बनाइरहेको छ । त्यस्तो प्रबृत्तिविरुद्ध हामी विगतदेखि नै लड्दै आएका पनि हौं र यस पटक हामीले समावेशी र सक्षम आरोही तथा व्यवसायिक टिम बनाएर अघि बढेको हुनाले सन्तबीर समुहको जित सुनिश्चित भइसकेको छ ।
जित्ने आधार भनेको देशभित्र रहेको हिमालको रोयल्टी उठाएर त्यो रोयल्टी पर्वतारोहण तथा आरोही र व्यवसायीको हितमा लगानी नगरेको केही सीमित व्यक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसको विरुद्ध खरो रुपमा यो टिम लागिरहेको छ । यूवा, अनुभवी, समावेशी टिम भएकोले यसको जित निश्चित छ । सन्तविर लामा भएर हामीले सहयोग गर्ने निर्णय गरेका होइनौं, एनएमएमा अहिले देखिएको जुन नातावाद, कृपावाद छ, त्यसलाई हटाएर अब यहाँका पीकहरुबाट संकलित रकमको सहिसदुपयोग गर्दै हाम्रो पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रलाई अत्यान्तै राम्रो बनाउने अभिलासाका साथ अघि बढिरहेका छौं ।
यो टिम पीक बचाउँदै न्यायोचित ढंगबाट व्यवस्थापनको लागि अघि बढेको छ । अहिलेसम्मका नेतृत्व वा अझ भनांै अहिले बढो क्रान्तिकारी ढंगबाट फेरी नेतृत्वमा आउनका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिनुभएका व्यक्तिहरुले पीक बचाउने एजेण्डा बाढिरहेका छन् । प्रश्न गर्न चाहान्छु, पीकको रोयल्टीवापत उठेको रकमलाई सम्बन्धित हिमालको व्यवस्थापन, प्रवद्र्धन, विकासमा खर्च गर्नुको सट्टा सीमित स्वार्थपूर्तिमा सक्ने अनि अहिले कस्तो पीक बचाउने कुरा गरिरहनुभएको छ ? तसर्थ, हामीजस्तो व्यवसायीहरुमाझ भ्रम छरेर हिजोदेखि खाइपाई आएको जुन स्रोत साधनलाई पुनः आफ्नै पोल्टामा ल्याउने यस्तो कोशिस सफल हुन दिनु हुँदैन । सबै न्यायप्रेमी व्यवसायी, आरोही मिलेर यस्तो प्रबृत्तिलाई जरैदेखि उखेल्नुपर्दछ ।
एनएमएमा जुन समुह जितेर गएपनि निम्न कार्यहरु गर्न नसके फेरी नालायकीपन हुनेछ /
१. सस्था चलाउन बिज्ञ सीइओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) सबै रास्ट्रिय तथा अन्तरास्ट्रिय संघ सस्थाहरु संग प्रोपोजल लेख्न सक्ने सहकार्य गर्न सक्ने र ब्यबस्थापन गर्न सक्ने व्यक्ति नियुक्त हुनु पर्यो /
२. तालिम बाहेक पिक क्लाइम्बिङ्, रक क्लाइम्बिङ्, आइस क्लाइम्बिङ् जस्ता अन्तरास्ट्रिय प्रतियोगिता तथा सेमिनारहरु नेपालमा आयोजना गर्न सक्नु पर्ने जसले गर्दा नेपालमा आउने पर्यटकहरुको संख्या ब्रिद्दि हुने र रजिस्ट्रेसन फि संघलाई फाइदा हुन्छ /
३. विश्वको अन्तरास्ट्रिय हिमाल सम्बन्धि औपचारिक शिक्षा दिने फ्रान्सको समोनिसमा रहेको येन्सा स्कुलसंग सहकार्य गरि त्यस्तै स्कुल वा नेपालमा त्यसको ब्रान्च विस्तार गर्नु पर्यो /
४. प्रत्येक हिमालमा दुर्घटनामा परि मृत्यु हुने आरोहीहरुको बाल बच्चाहरुलाई फ्री शिक्षा दिनु पर्ने
५. नया नया पिकहरुको अन्वेषण, नामकरण, नक्सांकरण, बिस्तृत विवरण आदि तयार गरि प्रबर्द्दन गर्ने
पहिल्यै पनि अध्यक्ष भैसकेको जिम्बा जा शेर्पाले खासै राम्रो कार्य गर्न सकेको जस्तो लाग्दैन तेसैले यश पटक को निर्वाचनमा सन्तबिर लामा लाइनै जिताउ भन्ने हामी माज कुरा भैरहेको छ।।